Ezi zii-smartphones ze-14 Xiaomi eziza kufumana i-Android 7.0 | Iindaba zeGajethi
Ezi zii-smartphones ze-14 Xiaomi eziza kufumana i-Android 7.0
Sele bebaninzi abavelisi esele beqalisile ukuhlaziya izixhobo zabo eziphathwayo ukuze zitsha Android 7, Kodwa kude kube ngoku u-Xiaomi ebengekabhengezi ngokusemthethweni ukungakhululeki phakathi kwenani elikhulayo labasebenzisi abanesiphelo esivela kumenzi wase China. Nangona kunjalo, kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo sele sazi uluhlu lwee-smartphones ze-14 eziza kufumana ingxelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle.
Ewe okwangoku UXiaomi akawunikanga nawuphi na umhla wokufika kwe-Android 7 kwiziphelo zayo ekufuneka sicinge ngayo ukuba kufuneka silinde kuqala ukufumana inguqulelo entsha ye-MIUI njengesiqhelo.
Apha ngezantsi siza kukubonisa zonke iifayile ze Izixhobo zeXiaomi zihlaziywa kuhlobo olutsha lwe-Android, ukwahlula abo baya kufumana i-Android 7.0 kunye ne-Android 7.1;
Xiaomi Mi Inqaku
Xiaomi Mi Qaphela 4X
Kolu luhlu luphela, ukungabikho kwe-Redmi Note 4 yoqobo kuyabetha, okwangoku kungazukufumana i-Android 7, nangona sisoyika kakhulu ukuba akufuneki sitsho ukuba ingayifumana kwixesha elizayo elingekude kakhulu. ukubona iMi Qaphela ukuba iya kufumana ingxelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle ngokuchasene nazo zonke iingxaki.
Ngaba uyaphoswa okanye unayo i-terminal yokugcina kuluhlu olunikezelwe nguXiaomi lwezixhobo eziza kufumana i-Android 7 kwiiveki ezizayo?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ezi zii-smartphones ze-14 Xiaomi eziza kufumana i-Android 7.0
Undenzele ubabalo olungathethekiyo ukwazi ukuba iselfowuni yam (Xiaomi Qaphela 4) ayizukuhlaziya kwi-Android 7. Oko kunye nohlobo lwezixhobo ezisisiseko: Redmi 4 kwaye enjalo. Bayeke? ...
Masibone ... ndineMi5 kunye neMIUI 8.2.2 malunga neenyanga ezi-2 okanye ezi-3 kwaye i-Android sele ingu-7.0 ...
USony ujoyina imeko ye-smartphone ngaphandle kwesakhelo esikrinini
I-CRISPR, itekhnoloji yokusika kunye nokuguqula ukulandelelana kwe-DNA